Ozi - Ndị egbugbu egbugbu ahọrọ akara akwụkwọ mmado tattoo
Ndị egbugbu a ga-ahọrọ akara mmado tattoo
Onye ọ bụla maara okwu egbugbu, nri? N'oge a, n'anya ọtụtụ mmadụ, a ga-ahụta onye ọ bụla nwere egbugbu n'ahụ ya dị ka onye na-elekọta mmadụ. Ọtụtụ ndị ahọrọla igbu egbugbu iji na-achụ ihe akpọrọ "dị jụụ" n'anya ha. Igbu egbugbu egbuwo ihe na-ewu ewu n’oge a, dịka ụmụ agbọghọ. Onye ọ bụla nwere obi ịhụ mma n’anya, mana ọ dịghị akwa ụta n’ụwa a.
Gịnị mere i ji kwuo otú ahụ? Maka na ọtụtụ ndị na-akwa ụta mgbe egbugbu ha gbuchara. Ọ na-ewute ya mgbe ị na-egbu egbugbu ahụ, ọbụnakwa na-afụ ụfụ mgbe ị na-ewepụ egbugbu ahụ. Ọtụtụ di na nwunye na-eto eto na-eme nzuzu n’oge ịhụnanya, dị ka egbugbu di na nwunye, mana gịnị gbasara mgbe ha gbasara? Nọrọ ka ncheta? Nke a agaghịkwa arụ ọrụ, maka na ọ bụrụ na ịnweghị nke a, ị ga-enwe nke ọzọ. Mgbe ị wepụrụ egbugbu ahụ, ị ​​ga-akwa ụta.
Ndị egbugbu a ga-ahọrọ akara mmado?
A na-ehichapụkwa egbu egbu ma ọ bụrụ na agba agba, a gbanwere ụkpụrụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ masịghị gị. Onye editọ ahụ nwere ọrụ dị ukwuu ịgwa gị na akwụkwọ mmado na-enweghị ike dochie egbugbu. Ihe mmado na-egbu egbu bụ onye hụrụ n'anya, egbugbu a bụ onye na-eso ndụ niile. Ihe dị iche n’etiti ha abụọ bụ ihe doro anya. Onye ọ bụla na-ekwukarị: you na-a alcoholụ mmanya na-aba n'anya? Enwerem akuko banyere egbugbu ...
Oge nzipu ozi: Ọgọst-14-2020